विजयी उम्मेद्‌वारहरु | Bishow Nath Kharel
अभिषेक प्रताप शाह, फोरम नेपाल
कफिवस्तु-५ बाट मधेसी जनअधिकार फोरम नेपालका अभिषेक प्रताप शाह ८८४८ मत ल्याएर विजयी भएका छन् । उनका निकट्म प्रतिद्वन्द्वी मंगलप्रसाद गुप्ता ७३८६ मत ल्याएका छन…
शेरबहादुर तामाङ, एमाले
शेरबहादुर तामाङ, एमाले सिन्धुपाल्चोक–३ सिन्धुपाल्चोक ३ मा एमालेका शेरबहादुर तामाङले १४ हजार ५ सय २६ मत ल्याएर विजयी भएका छन् । उनको निकटतम् प्रतिद्वन्दी १२ हजार ९० मत ल्याएर राप्रपा अध्यक्ष पशुपति समशेर राणा बनेका छन् ।…
मो.मुस्ताफ आलम, फोरम लोकतान्त्रिक
रौतहट-२ बाट फोरम लोकतान्त्रिकका मो. मुस्ताफ आलम १३४५० मत ल्याई विजयी भएका छन् । उनका निकट्म प्रतिद्वन्द्वी मो आफ्ताव आलमले १०४१५ मत ल्याएका छन्…
कमलेश्वर पुरी गोश्वामी, तमलोपा
रुपन्देही क्षेत्र नम्बर ७ बाट तराई मधेश लोकतान्त्रिक पार्टीका उम्मेदवार कमलेश्वर पुरी गोश्वामी विजयी भएका छन् ।…
सुनिल थापा, राप्रपा
राप्रपाका सुनिल थापा धनकुटा क्षेत्र नम्बर २ बाट विजयी भएका छन् । उनी राप्रपा अध्यक्ष सुर्यबहादुर थापाका छोरा हुन् । थापाले आफू अस्वस्थताको कारण देखाउँदै छोरालाई आफ्नो क्षेत्रमा उठाएका थिए…
धनबहादुर बुढा, एमाले
डोल्पामा प्रतिद्वन्द्वीभन्दा दोब्बर मतले एमालेका धनबहादुर बुढा विजयी भएका छन् । बुढाले ६ हजार ९ सय ८७ मतप्राप्त गरे । उनका प्रतिद्वन्द्वी एमाओवादीका सत्य पहाडीले २ हजार ७ सय ७४ मतप्राप्त गरेकी छन्…
अर्जुनप्रसाद जोशी, कांग्रेस
पर्वत क्षेत्र न. १ मा नेपाली कांग्रेसका अर्जुनप्रसाद जोशी तेस्रो पटक जित हात पारेका छन् । जोशीले १२ हजार ८ सय ६७ मत प्राप्त गरेर बिजयी भएका हुन् ।…
प्रेमबहादुर आलेमगर, एमाले
डोटी क्षेत्र नं. २ को अन्तिम परिणाम अनुसार एमालेका प्रेम बहादुर आलेमगर बिजयी भएका छन् । मगरले १२ हजार ४०० मत ल्याएका थिए…
बीरबहादुर बलायर, कांग्रेस
डोटीको निर्वाचन क्षेत्र नं. १ मा नेपाली कांग्रेसका बीर बलायर बिजयी भएका छन् । बिहान साढे ५ बजे सार्वजनिक गरिएको नतिजा अनुसार बलायरका निकटतम प्रतिद्धन्दी नेकपा एमालेका नारद मलासीले ८ हजार २ सय ४७ मत ल्याएका छन् ।…
बिकास लम्साल, एमाले
पर्वत क्षेत्र नं. २ मा नेकपा एमालेका विकास लम्सालले ११ हजार १ सय ४१ मत ल्याएर बिजयी भएका छन् । लम्सालका निकटतम नेपाली काँग्रेसका नववार गुरुङले १० हजार १ सय १३ मत पाएका छन् । विजयी लम्साल एमाले जिल्ला अध्यक्ष हुन भने गुरुङ पूर्व अध्यक्ष हुन् ।…
टुकराज सिग्देल, एमाले
तनहुँ क्षेत्र नम्बर ३ बाट एमालेका टुकराज सिग्देलले १५ हजार ९ सय ७४ मत प्राप्त गरी विजयी भएका छन् । उनले निकटतम प्रतिद्वन्द्वी कांग्रेसका जितप्रकाश आलेले १४ हजार ३ सय ८५ मत प्राप्त गरेका थिए । एमाओवादीका रमेश सिग्देलले ५ हजार ४ सय २८ मत प्राप्त गरे ।…
एमालेका सुबास ठकुरीले मकवानपुर २ बाट ११ हजार ७ सय ११ मत ल्याएर संविधानसभाको सीट सुरक्षित बनाएका छन् । एमाओवादीका नेता नारायणकाजी श्रेष्ठ १० हजार ७ सय २० ल्याएर दोस्रा बनेका छन्।…
बलबीर चौधरी एमाले
बारा-५ मा एमालेका बलबीर चौधरी उम्मेदवार विजयी भएका छन् । चौधरीले १५८०० तथा उनका निकट्म प्रतिद्वन्द्वी कांग्रेसका उमाकान्त चौधरीले १०६७१ मत ल्याएका छन् ।…
शंकर भण्डारी, कांग्रेस
तनहुँको क्षेत्र नम्वर १ बाट कांग्रेसका शंकर भण्डारी विजयी भएका छन् । उनले १५ हजार ७ सय १३ मत ल्याएका छन् । उनका निकटतम प्रतिद्वव्दि एमालेका रामबहादुर गुरुङ्गले ११ हजार १८ र एमाओवादीकी सिता पोखरेललले ६ हजार ४ सय ८० मत प्राप्त गरेका छन् ।…
प्रेमबहदुर आले, एमाले
डोटी-२ मा एमालेका उम्मेदवार प्रेमबहादुर आले मगर विजयी भएका छन् । उनले १२४०० मत पाएका छन् । निकटम प्रतिद्वन्द्वी कांग्रेसका योगेन्द्रबहादुर शाहीको १०९१४ मत पाएका छन्…
धनबहादुर घले, एमाले
धनबहादुर घलेले ८ हजार ६ सय ६३ मत ल्याएर धादिङ–१ मा बिजयी भएका छन् । काँग्रेसका तिलक रुवाली ७ हजार ६ सय ५६ मत ल्याएर निकटतम् प्रतिद्वान्दी बनेका छन् ।…
राजेन्द्र पाण्डे, एमाले
राजेन्द्रप्रसाद पाण्डेले २२ हजार १ सय ९३ मत ल्याई धादिङ–३ बाट विजयी भएका छन् । उनका निकटतम् प्रतिद्वन्दी शालिकराम जमरकट्टेलले १५ सय ६६६ मत ल्याएका छन् । पाण्डे अघिल्लो संविधानसभामा जमरकट्टेलसंग पराजित भएका थिए ।…
ध्यानगोविन्द रञ्जित- कांग्रेस
काठमाडौ-९ मा कांग्रेसका ध्यानगोविन्द रञ्जित १४४८३ मत ल्याई विजयी भएका छन् । उनको निकट्म प्रतिद्वन्द्वी एमालेका कृष्णगोपाल श्रेष्ठले १३१०० मत ल्याएका छन्…
यज्ञबहादुर थापा, कांग्रेस
कास्की १ मा कांग्रेसका यज्ञबहादुर थापा १५८३२ मत ल्याएर बिजयी भएका छन् । निकटतम प्रतिद्वन्द्वी एमालेका मानबहादुर जिसीले १५५६० मत ल्याएका छन् ।…
नविन्द्रराज जोशी, काँग्रेस
काठमाडौं-८ बाट नेपाली कांग्रेसका नविन्द्रराज जोशी विजयी । उनले १३७७४ मत ल्याएका छन् । उनका निकट्म प्रतिद्वन्द्वी एमालेका जीवन राम श्रेष्ठले ६३६७ मत ल्याएका छन् ।…
सुशीला चौधरी, काँग्रेस
दाङ क्षेत्र न. २ मा नेपाली कांग्रेसकी उम्मेदवार सुशीला चौधरी विजयी भएकी छन् । उनले १०४३३ मत पाएकी छन् । उनका निकट्म प्रतिद्वन्द्वी होमबहादुर पुनले ८५५८ र एमालेकी शान्ता चौधरीले ७४०२ मत पाएकी छन् ।…
सीता गिरी ओली, एमाले
कास्की ४ मा एमालेकी सीता गिरी ओली १५ हजार ४ सय ३८ मत ल्याएर बिजयी भएकी छन् । यो निर्वाचनमा विजयी पहिलो महिला हुन् । ओलीको निकटतम प्रतिद्वन्द्वी काँग्रेसका महादेव गुरुङको १३ हजार १ सय ४७ मत ल्याएका छन्…
सोमप्रसाद पाण्डे, एमाले
पाल्पाको क्षेत्र नम्बर २ मा एमालेका सोमप्रसाद पाण्डे बिजयी भएका छन् । उनले १३१९३ मत पाएका छन् । उनको निकटत् प्रतिद्वन्दी वीरबहादुर रानाले १३०९८ र एमाओवादीका बसन्त शर्मा ४९६७ मत पाएका छन् ।…
रविन्द्र अधिकारी, एमाले
कास्कीको क्षेत्र नम्बर ३ मा एमालेका युवा नेता रविन्द्र अधिकारीले १३ हजार १ सय १० मत ल्याएर खाता खोलेका छन् । उनको निकटतम् प्रतिद्वन्दी काँग्रेसका सोभियत बहादुर अधिकारीले १० हजार ८ सय ८ मत ल्याएका छन्…
राजन केसी, काँग्रेस
नेपाली कांग्रेसले राजन केसी ७ हजार बढी मतले विजयी भएका छन् । केसीले २०३९२ मत ल्याएका छन्। एमाओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल त्यहाँबाट प्रतिस्पर्धी रहेकाले क्षेत्र चर्चामा थियो…
टेकबहादुर गुरुङ, काँग्रेस
कांग्रेसका टेकबहादुर गुरुङ १५२७ मत ल्याएर विजयी भएका छन् । उनका निकटतम प्रतिद्वन्द्वी राप्रपाका त्रिपल गुरुङले ११९२ मत पाए भने राप्रपा नेपालका भुजुङ गुरुङ ५६२ मतसहित तेस्रो भए । एमाओवादीका कपिल लामाले २६१ र एमालेका छिरिङ लोप्साङ गुरुङले ६० मत पाए ।…
Source : http://www.ekantipur.com/np/700807.